Esi ewepu akara mmiri site na foto na mmemme ndị a | Akụkọ akụrụngwa
Etu esi ewepu akara mmiri site na foto na mmemme ndị a
Paco L Gutierrez | 28/01/2021 11:36 | Emelitere ka 28/01/2021 12:37 | General
Ntaneti juputara na onyogho, gaa na Google ka ichota onyogho nke ihe obula anyi choro, n’efu. Ma ụfọdụ n'ime ihe ndị anyị na-ahụ na ịntanetị nwere onye nwe ha, na ihe oyiyi Ọ dị mfe ịmata mgbe onye nwe ya lere ya anya, ebe ọ bụ na ihe oyiyi ahụ nwere akara. Akara ndị a na-abụkarị obere logo na nkuku nke nchịkọta akụkọ nke foto ahụ na-eme ka o doo anya na ọ bụghị intrusive, na-ahapụ ọdịnaya dị ka protagonist.
Nke a abụghị mgbe niile, oge ụfọdụ, anyị nwere ike ịchọta logo a gharịị na onyonyo a, na-adị n'azụ mana o doro anya. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị ma ọ bụrụ na anyị echee na onye ọzọ ekwesịghị iji ihe oyiyi a mee ihe. Ọ bụ ihe ekwesịrị ịkwanyere ugwu ebe ọ bụ na ọ na-egosi na onye dere ya agaghị enwe oke ọ tooụ ịhụ foto ahụ onye ọzọ bipụtara. Mgbe ụfọdụ ọ bụ mmemme mmezi n'onwe ha ma ọ bụ ọbụlagodi ngwa igwefoto nke ụfọdụ mobiles na-ahapụ akara mmiri ha, anyị nwere ike wepu ya na ụfọdụ mmemme ma ọ bụ ọbụlagodi na ngwa weebụ. N'isiokwu a anyị ga-egosi otu esi ewepu akara mmiri na foto.
1 Iwu ọ kwadoro iwepu akara mmiri na foto?
2 Ihe nhicha mmiri
3 Iweghachite Foto foto
Iwu ọ kwadoro iwepu akara mmiri na foto?
Ọ bụrụ na foto ahụ bụ nke gị, naanị ị chọrọ iwepu akara mmiri nke mmemme ma ọ bụ ngwa igwefoto kụrụ, ọ bụ iwu zuru oke. Ndi mmepe nke ngwa ndi a ka emejuputara ndi a ka ha wee zoputa mgbasa ozi n'ime foto anyi obula, ihe ojoo na ihe ojoo. Ọ dị mkpa iburu n'obi na ọtụtụ n'ime akara ngosi a nwere ike wepu ya naanị site na ịjụ ntọala ntọala nke ngwa ndị ahụ.
Ọ bụrụ, na aka nke ọzọ, onyonyo a sitere na ịntanetị ma akara mmiri sitere n'aka onye na-ajụ ma ọ bụ onye ọ bụla, anyị nwere ike wepu akara mmiri ahụ ma ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ iji ihe onyonyo ahụ n'ụzọ nke aka anyị, mana ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ịba uru. site na iji ya, ọ bụrụ na anyị nwere ike inwe nsogbu gbasara iwu, ọ bụrụ na onye edemede ahụ chọrọ. Ebe ọ bụ na ịse foto na nhazi ya bụ ọrụ ọ bụghị mmadụ niile chọrọ inye.
Ozugbo a dọrọ anyị aka ná ntị banyere ihe ga-esi na ya pụta na iwu, anyị ga-ahụ ihe mmemme iji ma ọ bụ weebụsaịtị iji jiri kpochapụ akara ngosi ndị ahụ na-adịghị mma na nke na-adịghị mma, ọ bụ ezie na ọ nwere uche, na-emebi foto dị mma.
Ezigbo mmemme maka ọrụ a, na-enweghị mgbagha ọ bụ Watermark Remover. O nwere ngwa ọrụ niile dị mkpa iji kpochapụ ma ọ bụ mebie arịa niile anyị chọrọ site na onyogho, site na mmiri ngosi ruo na ezughị oke nke anyị achọghị ịhụ. A na-eme ya n'ụzọ dị mfe, n'ihi ya, ọ dịghị mkpa ka ị nweta mmụta dị elu gbasara edezi foto ma ọ bụ mmemme.
Ihe omume a bụ n'efu ma ọ chọghị nrụnye ọ bụla, anyị na-abanye na ntanetị wee bido, lee ụfọdụ ntuziaka ka esi eme ya:
Anyị na-emeghe ihe oyiyi site na mmemme na "Ngosiputa mmiri mmiri".
Anyị na-akara ebe ebe akara ahụ dị ma ọ bụ ihe ochie anyị chọrọ iwepụ.
Anyị chọta na pịa na nhọrọ "Tụgharịa"
Njikere, anyị ga-ewepu akara mmiri anyị.
Iweghachite Foto foto
Ihe omume ọzọ dị ezigbo mma maka ọrụ a bụ doro anya Photo Stamp Remover, mmemme dị mfe iji rụọ ọrụ ọbụlagodi na anyị ejighị kọmputa ahụ nke ọma. Ezubere usoro ihe omume a maka ọrụ a, yabụ ngwaọrụ ndị anyị na-ahụ maka iwepu akara mmiri dị iche iche ma dị ire. N'adịghị ka ngwa gara aga, a ga-enyerịrị ya na kọmputa anyị, yabụ anyị ga-ebudata ya na mbụ. Anyị ga-zuru ezu otú wepu watermark na a ole na ole dị mfe nzọụkwụ:
Anyị na-emeghe ngwa wee pịa «Tinye faịlụ» iji họrọ foto anyị chọrọ dezie.
Ozugbo e bugoro ihe oyiyi ahụ, anyị ga-aga n'akụkụ aka nri nke ngwa ahụ wee pịa nhọrọ ahụ "Akụkụ anọ" na Ngwaọrụ ngalaba.
Ugbu a naanị anyị ga-ahọrọ ebe mmiri mmiri ahụ dị na anyị chọrọ iwepụ na translucent rektangulu ga-kere gburugburu na-acha uhie uhie na agba, ọ ga-kwuru na tighter igbe a bụ na akara, mma ga-arụpụta.
Pịa na nhọrọ "Ọnọdụ nhichapụ" ma pịa na nhọrọ "Na-egbu egbu" nke menu anyị ga-ahụ egosipụta.
Ugbu a, anyị ga-pịa nhọrọ "Kpọọ" na watermark ga-ewepụ kpamkpam, agwụ mbipụta.
N’ikpeazụ ịchekwaa onyonyo, pịa na «Zọpụta dị ka», nhọrọ nke dị na nchịkọta nhọrọ nke ngwa ahụ.
Dịka anyị pụrụ ịhụ, iwepu akara mmiri site na onyonyo dị mfe ma ọ chọghị mmemme mmezi gbagwojuru anya, Ọ bụrụ n’inwere ntụnye ọ bụla banyere ụzọ ndị ọzọ iji rụọ ọrụ a, anyị ga-enwe obi ụtọ ịnata ha site na nkọwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Etu esi ewepu akara mmiri site na foto na mmemme ndị a
Onyinye kachasị mma maka Valentine teknụzụ
Nzukọ vidiyo na-esote ya site na Logitech Rally Bar